Soo BandhigidI Sida Loo Sameeyo Soo Bandhiga Warqadaha Kaamil Ah
, Ha la qoro shaqo cilmiyaysan
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah soo bandhigida
Inta lagu jiro waxbarashadaada waxaa si isdaba joog ah kuugu soo food saari doona hawsha sameynta soo bandhigid ku habboon PowerPoint (PPT) marka lagu daro warqad muddo dheer ah oo faahfaahsan. Gaar ahaan noloshaada dambe ee xirfadeed, ma awoodi doontid inaad iska ilaaliso hanashada bandhig waqti aad u gaaban gudahood dhagaystayaal hore loo qeexay.
Bandhigga PowerPoint waa matalaadda qoraalka heer muuqaal ah. Sayniska isgaarsiinta ayaa daahfuray sida ay muhiimka u tahay isgaarsiinta muuqaalku. Wadahadalku ma aha erayga lagu hadlo ee la maqlo oo keliya. Iskusoo wada duuboo, nuxurka dhabta ah ee fariinta waxaa lagu gudbiyaa waxyaabo kale oo badan. Wadahadal aan afka ahayn ayaa aad uga muhiimsan kanaalka xaqiiqada-luuqadeed ee isgaarsiinta. Xitaa 10% ereyga lagu hadlo looma arko inuu yahay mid muhiim u ah dhagaystaha. Tani waxay ka dhigan tahay in 90% dhammaan isgaarsiinta lagu maro marinno aan hadal ahayn.
Isgaarsiinta macluumaadka iyadoo loo marayo soo bandhigida PowerPoint
Maaddaama uu yahay mid ka mid ah noolaha faro ku tiriska ah, aadamuhu wuxuu fursad u haystaa inuu dadka kale kula xiriiro xagga luqadda. Isfaham la'aanta waxaa laga nadiifin karaa wadada isticmaalka luqadda. Khadadka isgaarsiinta ee aan hadalka aheyn, oo ah inaan la dhayalsan karin sinnaba, waxay muujinayaan gudbinta macluumaadka qadiimiga ah.
Isgaarsiinta macluumaadka waxay ku jirtay jahwareer dhameystiran dhowr sano. Maanta waxaa suurtagal ah in lagu helo macluumaad dheeri ah daqiiqado gudahood ama xitaa saacad ka badan intii suurtagalka ahayd boqol sano ka hor. Daadadkan macluumaadka ayaa sidoo kale saameynaya fursadaha gudbinta macluumaadka.
Qeyb kale oo ka mid ah gudbinta macluumaadka iyo isgaarsiinta ayaa ah qodobka waqtiga. Waqtiga lagu dhammaystirayo hawlo badan ayaa cidhiidhi sii galaya. Dhinaca kale, culeyska fekerka ee wada xiriirka ayaa kordha. Waqti aad u yar ayaa ka hadhay khibrad wada hadal oo qof walba aakhirka ku qanco. Dhacdo ahaan, waqtiga ayaa ah cunsur lama huraan ah oo saameyn ku leh deegaanka xirfadlaha ah iyo tan gaarka loo leeyahay. Baaxadda ay waqtiga u sabab u tahay sidoo kale culeyska dhanka ganacsiga gaarka loo leeyahay ayaa laga arki karaa xaqiiqda ah in fasaxyada inta badan aan loo isticmaalin nasashada. Fasaxa tacabirka ayaa caan ah. Fasaxu wuxuu noqdaa sii wadida nolosha xirfadeed.
Marka la diyaarinayo soo jeedinta, waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo gudbiyo loona gudbiyo macluumaadka. Qofka gudbiya macluumaadka waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay diraha. Qofka ama kuwa hela macluumaadka waa kuwa qaata. Macluumaadka waxaa lagu keydiyaa guryaha dadka qaata haddii macluumaadka aan si dhaqso leh loo isticmaalin. Haddii macluumaadka la isticmaalo, beddelaad ayaa dhaceysa, macluumaadka waa la shaqeynayaa. Haddii xaqiiqooyinkan la tixgeliyo, soo bandhigiddu waxay noqoneysaa macluumaad dhammaystiran.
Maxaa ka mid ah macluumaadka la jooga dhagaystaha
Cilmu-nafsiga wada-hadalka wuxuu bixiyay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida, tusaale ahaan, soo-jeedinta loo arki karo guud ahaan duruufaha gudbinta macluumaadka. Wixii dhagaystayaashu maqlaan - soo bandhigida saafiga ah - kaliya 20% macluumaadka ayaa gaaraya dhagaystaha. Gudbinta macluumaadka si weyn ayaa loo hagaajiyay iyadoo la socota bandhigga PowerPoint. 30% waxa la arko waxaa loo farsameeyaa macluumaad muhiim ah. Tirooyinka ayaa muujinaya sida ay muhiimka u tahay soo bandhigida PowerPoint ee guuleysiga ah ee gudbinta macluumaadka. Waxa kale oo muhiim ah in la xasuusnaado in bandhiggu aanu ku jirin macluumaad badan oo qoran. Maxaa yeelay 10% kaliya waxa la aqrinayaa waxay kujiraan xusuusta. Marka la qorsheynayo soo bandhigid, naqshad wax ku ool ah oo ku saabsan bogagga oo leh macluumaad yar oo qoran intii suurtagal ah ayaa muhiim ah. Intaas waxaa sii dheer, marinnada kala duwan iyo calaamadaha dhagaystayaasha waa in lagu xisaabtamaa inta lagu guda jiro soo bandhigidda. Qof kastaa wuxuu leeyahay habab soo dhaweyn u janjeedha oo kala duwan oo ay tahay in looga hadlo soo bandhigidda. Annagu bani aadamku waxaannu leenahay nidaamyo matalaad ama qaabab kala duwan, kuwaas oo ka duwan:
Olfactory iyo O
Wax ka ogaanshaha kanaalkan dareenka ayaa sahlaya in la abuuro bandhig PowerPoint ah. Gaar ahaan, waxay tixgelineysaa saddexda wadiiqo ee dareenka ugu horreeya.
Caawinaad xirfad leh oo ku saabsan sameynta bandhig PowerPoint ah
Waxaad la kulantay hawsha ah inaad u abuurto PPT waraaqdaada muddada, bachelorka ama shahaadada mastarka ama inta lagu gudajiray dhakhtarkaaga si aad uga warbixiso natiijooyinkaaga cilmi baarista. Waqtiga illaa inta bandhigga dhabta ahi aad u adag yahay - maxaa yeelay inta ka horeysa waxaad sidoo kale ku mashquulsan tahay qorista natiijooyinkaaga. Si dhib leh uma aragtid suurtagal kasta oo aad ku abuuri karto soo bandhigid PowerPoint ah oo ku habboon qiyaastii 15 bog. Bogagga waa inaan si fudud loo soo bandhigin, laakiin halkii dhagaystaha la siin lahaa waayo-aragnimo badan oo warbaahin ah iyada oo loo marayo isku-darka animations-ka iyo wareejinta is-beddelka qulqulka. Xaaladahan waxaan ku siin karnaa caawimaad xirfad leh. Anaga - wakaaladda qorista qoraalka ee Papernerds - kaliya ma lihin qorayaasha mawduucyada gaarka u ah maadooyinka tacliinta. Qorayaashayadu sidoo kale waxay awoodaan inay abuuraan bandhig PowerPoint ah heerka sayniska ugu sareeya. Haddii aad qortay qoraal oo waliba aad u baahan tahay PPT, wax dhib ah malahan in lagu abuuro PPT rafcaan leh muddo aad u yar gudahood. Qorayaasheennu way ogyihiin waxa muhiimka ah. Markaad qoraalkaaga u diyaariso qorayaashayaga, qorayaashayadu way yaqaanaan waxa diiradda la saarayo.
Dabcan sidoo kale waxaa jira kiisas ay tahay in qoraal loo qoro PPT marka hore. Tani sidoo kale caqabad kuma noqon karto qorayaasheena.Labadaba - qoraal iyo PPT - waxaa sameeyay qorayaasheena waqtigii loogu talagalay.
Adeegsiga shirkad qormooyin ku qoreysa sida kuweena oo kale waa maalgashi macquul ah oo qiimo leh mustaqbalkaaga mihnadeed.
Qorayaasha u shaqeeya wakaaladeena qorista waxay ku takhasusay arimahooda. Waxay leeyihiin ugu yaraan shahaadada mastarka oo ah shahaado tacliimeed, qaarkoodna sidoo kale waxay heleen dhakhtar ama baxnaanis. Ku dadaalayaas waxbarasho ee ka imanaya qorayaasheena had iyo jeer waxay ku siinayaan heerka ugu sarreeya aqoonta takhasuska leh. Haddii aad rabto inaad ku iftiimiso bandhig PowerPoint ah oo gaar ah, waa inaadan ka gaabin daqiiqad oo aad ka faa'iideysato adeegyadeenna. Waxaan kuu raaceynaa xirfad ahaan iyo maskax ahaanba ilaa bandhiggaaga.
Hubinta tayada ee aagga bandhigga